बिहार जोगाएर नेपाल डुबाउने,तस्करी धन्धा चलाएर को-को हुन् राष्ट्रवादी ठहराउने « हाम्रो ईकोनोमी
बिहार जोगाएर नेपाल डुबाउने,तस्करी धन्धा चलाएर को-को हुन् राष्ट्रवादी ठहराउने
वि.सं.२०७४ साल श्रावण महिनाको अन्तिम साता आएको अविरल वर्षाका कारण कतै डुबानमा परेर त कतै कतै बाढी पहिरोमा परेर सैयौंको अकालमा ज्यान गयो ।
केही वर्ष यता पहिरो जाने र डुबान हुने क्रम बढेको छ । पहिरो जानुका कारणहरु मध्ये सडक निर्माण र जथाभावी ढुङ्गा गिट्टीको अवैध धन्दाले गर्दा यस्तो भैरहेको छ ।
तराईको चुरे क्षेत्रमा अवैध रुपमा उत्खनन गरिएका ढुङ्गा गिट्टी र जंगलै सखाप हुने गरी गरिएको काठ तस्करीले गर्दा बाढी पहिरो निम्तिई रहेको छ । वर्षातमा दुई दिन कराएर वा बाढी पीडितहरुलाई हात्तीको मुखमा जिरा भने जस्तो गरेर राहत वितरण गरी टोपल्दैमा दिगो रुपमा समस्या समाधान हुँदैन ।
के कारणले डुबान भैरहेको छ ? के कारणले पहिरो गैरहेको छ रु त्यस्को कारण पत्ता लगाउनु पर्छ । अनि समस्या समाधानको विषय पहिल्याउनु पर्छ । जनताले निर्माण गरेका सडकहरुमा मात्रै पहिरो जाने गरेको छैन । सरकार स्वयंले निर्माण गरेका राजमार्गहरु समेत पहिरोको चपेटामा परेर धनजनको क्षति समेत हुने गरेका छन् । पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुनु त साधारण भैसकेको छ ।
सडकहरुका अवस्थाको चित्रण गर्न देशभरिको अवस्था बताइरहनु पर्दैन । काठमाडौँ उपत्यकाको दुरावस्थाले सिङ्गो देशकै प्रतिनिधित्व गर्छ । साल तमामीका बेला ठेकेदार, प्राविधिक, मन्त्रालयका सचिवहरु, मन्त्रीहरु र विभिन्न पार्टीका नेताहरुका मिलेमतोमा कमसल सामग्रीहरु प्रयोग गरेर सम्पन्न गरिएका कागजी विकासहरु एकदुई महिनापछि उप्केर जाने, पुलहरु भास्सिएर जाने वा भाँच्चिने गरेका छन् ।
नक्कली विकासले यस्तो अवस्था निम्त्याइरहेको छ । सेटिङ मिलाएर तलदेखि माथिसम्मका मिलेमतोमा काले काले मिलेर खाउँ भाले भैरहेको छ । राजनीतिक नेताहरु अरुका रिमोट कन्ट्रोलमा चल्ने लम्पसारवादी दासहरु भएपछि सत्ता वा व्यवस्था परिवर्तनका नाउँमा देशका नदी नालाहरु पराईका चरणमा भेटी चढाए जस्तो गरी चढाई रहेका छन् । सप्तकोशी, सप्तगण्डकी, सप्तमहाकाली चढाई सकेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन समेतलाई मिचेर दशगजा क्षेत्रमा अग्ला अग्ला सडकहरु र बाँधहरु निर्माण गर्दा चुँइक्क नबोल्नेहरुले देशका रक्षा कसरी गर्छन् रु आफ्नो राष्ट्र डुबान हुनेगरी निर्माण गर्न लागिएका संरचनाहरुलाई मद्दत पुग्नेगरी चुरे क्षेत्र नाङ्गै हुने गरी माटो, गिट्टी, ढुङ्गा र नदीका बालुवाहरु रोजै हजारौं टिप पठाउने राष्ट्रघातीहरु को हुन् ? जनताले खोतलेर हेर्नुपर्ने भएको छ । डुबान र बाढी पहिरो भएको छ ।
डुबान र बाढी पहिरो यो वर्ष मात्रै होइन, २०४६ सालको परिवर्तनपछि यो वर्षेनी बढ्दै गैरहेको छ । डुबाउनेहरुले डुबाइरहेका छन् । डुब्नेहरु डुबिरहेका छन् । वर्षेनी राहत बाँढेर समस्या समाधान हुँदैन । बाढी पहिरो नजाने र डुबाान नहुने काम गर्नुपर्छ ।
अर्काको डुबान गर्दा सहेर बस्नु हुँदैन ,दिव्यचक्षुमा उल्लेख छ। नेपालको बाँधको ढोकाको साँचो पराईको हातमा भएपछि नेपाल नडुबे के भारत डुब्छ ?
नेपालको बाँध खोल्दा भारत डुब्छ भनेर ढोका खोल्नु हुँदैन भन्ने मन्त्रीहरु क्याबिनेटमा भएपछि सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रको हैशियत पनि गुमाएछन् कि भन्ने डरलाग्दो स्थिति देखिएको छ ।